घरमा अचानक तुलसीको बोट सुक्यो भने तुरुन्त गर्नुहोस् यी काम, नत्र निम्तिनसक्छ संकट – Sandesh Press
घरमा अचानक तुलसीको बोट सुक्यो भने तुरुन्त गर्नुहोस् यी काम, नत्र निम्तिनसक्छ संकट
October 3, 2021 209
काठमाडौँ । हिन्दू धर्ममा तुलसीको बोटलाई निकै पवित्र मानिने गरिन्छ। धेरैजसो व्यक्तिको आँगन वा छतमा तुलसीको बोट अवश्य हुन्छ। साथै यसलाई रहेक दिन पूजा पनि गरिन्छ। तुलसीको पूजा गर्ने परम्परा निकै पूरानो हो ।
तुलसीको पूजा गर्दा देवी देवताको कृपा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। साथै घरमा हुने सबै प्रकारका नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने र सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शास्त्रमा तुलसीसँग जोडिएका धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसलाई ध्यान दिन निकै आवश्यक छ। यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्दा नराम्रो परिणाम भोग्नु पर्ने बताइएको छ। आज हामी तपाईलाई शास्त्रसँग जोडिएका तुलसीसम्बन्धी केही विशेष कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती कुरा ?
नचपाउनुहोस् तुलसीको पात
हामी सबैलाई थाहा छ हिन्दू धर्ममा तुलसीलाई निकै पवित्र र पुजनिय मानिन्छ। त्यसैले तुलसीको पातलाई दाँतले चपाउनु निकै अशुभ मानिन्छ। तुलीलाई नचपाएरै निल्नु शुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शिव लिंगमा तुलसी नचढाउनुहोस्
शिवपुराणका अनुसार दानव शंखचुडलाई पत्नी तुलसीको पतिब्रता धर्मका कारण उनलाई कुनै पनि देवताले पराजित गर्न पाएका थिएनन्। त्यसैले भगवान विष्णुले भेष बदलेर धोकासहित तुलसीको पतिब्रता खण्डित गरेका थिए।
त्यसैबेला भगवान शिवले शंकचुड दानवको वध गर्न सक्षम भएका थिए। यही छलसँग क्रोधित भएकी तुलसीले आफ्नो प्रयोग कहिलै पनि भगवान शिवको पूजामा कसैले प्रयोग नगर्नु भन्ने श्राम दिएकी थिइन्। त्यसैले शिवलिंगमा कहिलै पनि तुलसीको प्रयोग गर्न हुँदैन् भन्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।
यो समय नटिप्नुहोस् तुलसी भूलेर पनि तुलसीको पातलाई एकादशी, आइतबार, सूर्य वा चन्द्र ग्रहणका दिन टिप्तु हुँदैन्। साथै बिना कुनै कारण पनि तुलसीको पात टिप्नु अशुभ मानिन्छ। यदी कुनै पनि कारण तुलसीको पात टिप्नु तुलसी नष्ट गर्नु समानको पाप हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हरेक दिन तुलसीको पूजा
हरेक दिन व्यक्तिले तुलसीको पूजा गर्नु पर्छ भने साँझ गरेपछि त्यसको नजिकै दियो बाल्नु पर्छ। जुन व्यक्तिले हरेक दिन साँझ तुलसीको बोट नजिकै दियो बाल्छ त्यहाँ सधैँ लक्ष्मीको बास हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
अचानक तुलसी सुके के गर्ने ?
यदी अचानक तुलसीको बोट सुक्यो भने त्यसलाई पवित्र नदी वा तलाउ वा इनारमा प्रवाहित गर्नुहोस्। तुलसीको सुकेको विरुवा घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ। साथै यस्तो तुलसी घरमा राख्दा कुनै किसिमको संकट आइलाग्ने शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ।
नकारात्मक उर्जाबाट बचाउँछ
घरमा तुलसीको विरुवा लागाउँदा नकारात्मक उर्जाबाट बचाउने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथसाथै घरको आगनमा तुलसी रोप्दा वरपरको वातावरण पनि सकारात्मक उर्जाले भरिने र नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने बताइएको छ।
Prevआङगेलु शेर्पा बिरुद्ध यस्तो सम्म खेल भएको रहेछ जसले ७७ जनाको ज्यान बचाए उसैलाई कारवाही भन्दै खुल्यो अन्तरिक रहस्य-भिडियो सहित
Nextपिपलको बोट उखेन्दा पनि लाग्छ पितृ र शनि दोष, निम्तिनसक्छ दुर्भाग्य